မြန်မာတွေ ပြန်ပြီး အတုယူ သင့်လှတဲ့ အသံချဲ့စက်တွေ လော်စပီကာတွေ လုံးဝ မပါတဲ့ သူများနိုင်ငံက ကထိန်ပွဲလေး – Cele Stars
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အလှူဆိုလည်း လော်စပီကာ..ကထိန်ဆိုလည်း လော်စပီကာနဲ့ သီချင်းတွေ တရားတွေဖွင့်တတ်ကြပါတယ်….အလှူမှာ ကထိန်မှာ လော်စပီကာဖွင့်တာကို အပြစ်မပြောကြပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လော်စပီကာကို အချိန်မတော်ထိ အကျယ်ကြီးဖွင့်တာ…ပတ်ဝန်းကျင် မခံသာအောင် ဆူညံစွာဖွင့်ပြီး အရက်သေစာသောက်စား ကခုန်တာတွေ ပြုလုပ်လာတာကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့သလို လော်စပီကာအကျယ်ကြီးဖွင့်လို့ ရန်ပွဲတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြဿနာသတင်းတွေကို လည်း မကြာခဏတွေ့ရှိရပါတယ်…
ဒါ့ကြောင့် လော်စပီကာကို ဆူညံစွာဖွင့်ရင် တိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေလည်း ထုတ်ပြန်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်…ယခုဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ အင်တာနက်မှာ လူတွေချီးကျူးနေကြတဲ့ လော်စပီကာမပါတဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံက ကထိန်ပွဲ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းပါ….
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ လော်စပီကာမပါဘဲ ရိုးရာအိုးစည်ဗုံမောင်းတွေကို တီးခတ်ပြီး ဘုရားပုံတော်တွေကိုင် သာသနာ့အလံတွေကိုင်ကာ စီတန်းပြီး ကထိန်ခင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အဲလိုတီးခတ်ရာမှာလည်း ဆူညံစွာတီးခတ်တာမဟုတ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေတဲ့ အသံမျိုးနဲ့သာ ထိန်းသိမ်းတီးခတ်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်…
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်ရှုရသူတွေကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း လော်စပီကာတွေ အကျယ်ကြီးမဖွင့်ဘဲ အဲဒီလိုမျိုးလေး ကထိန်လှည့်ကြ မယ်ဆို ကောင်းမှာပဲ… ဒီလိုမျိုးတွေကို အတုယူသင့်တယ်လို့ မှတ်ချက်စကားတွေ ပြောထားကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်…
ပရိသတ်ကြီးတို့ရော လော်စပီကာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်ကြပါသလဲ…အောက်မှာ အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ပျို့အန်ခြင်းကို မကြာခဏ ခံစားနေရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ အိုင်ကျူ မြင့်တဲ့ကလေး မွေးလာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရှိရ